Igbo, John: Lesson 043 - Jizọs nyere ndị mmadụ nhọrọ, "Nabata ma ọ bụ jụ!" (Jọn 6:22-59) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 043 (Jesus offers people the choice)
4. Jizọs nyere ndị mmadụ nhọrọ, "Nabata ma ọ bụ jụ!" (Jọn 6:22-59)
34 Ya mere ha siri Ya, Onye-nwe-ayi, nye ayi nri a mb͕e nile. 35 Jisus si ha, Mu onwem bu nri nke ndu. Onye nābiakutem agaghi-agu ya: onye nēkwere kwa na Mu, akpiri agaghi-akpọ ya nku.
Jizọs kpaliri ndị na-ege ya ntị agụụ maka nri nke Chineke, ma wepụ ha n'agbụ nke ọrụ ụfọdụ. O kere nime ha nchegbu maka nzoputa, na akwadebe ha ka ha nweta onyinye Chineke; ọ kọwara mkpa ọ dị inwe okwukwe na ya.
Ya mere ìgwè madu ahu kwenyere n'ekpere siri ike, "Gi onye nyere gi nri Chineke, nye ayi onyinye a di iche iche mgbe nile, iji zoputa ayi n'olu oru ayi ayi kwado gi, mejuputa anyi na ndu ebighebi, nye anyi ike gi!" Ha ka na-eche banyere nri nke ala, mana ọ dịkarịa ala maara na onyinye Chineke pụrụ iche.
Jizos eleghi anya obula eji eme ya. O mere ka o doo anya na ya bụ nri Chineke maka ụwa dum, ọ bụghị onye na-enye nri. Ya onwe ya nyere onye mejupụtara ndụ ebighị ebi. O kwuru, sị, "E wezụga m, ị gaghị ahụ ndụ ebighi ebi: m bụ onyinye Chineke nye gị, ọ bụrụ na ị bụghị m, ị ga-anọ n'ọnwụ."
"Dika achicha si abanye n'ime gi ma nye gi ume maka ibi ndu, ya mere achoro m ibata nime gi, ime ka obi na uche gi di ndu, ka i wee di ndu na Mo Nso. Nye m onwe m n'efu. Ikwesighi ịkwụ ụgwọ ihe ọ bụla; naanị kwe ka m banye n'ime obi gị. " Nwanna, ị chọrọ Kraịst. Ịgụ okwu ya ma ọ bụ ịghọta echiche ya ezughị. Ị chọrọ ya onwe ya. Ọ dị gị mkpa dịka ihe oriri na mmiri kwa ụbọchị. Ọ dịịrị gị ịnata ya ma ọ bụ na ị ga-ala n'iyi.
I nwere ike ịjụ, olee otu o si abanye n'ime isi m? Ọ na-aza: Ka obi gị dịrị m ogologo, bịaruo m nso ma jiri obi ekele nabata m, kwere na m. Ọbịbịa nke Jizọs n'ime obi anyị mezuru site n'okwukwe. Daalụ Jizọs n'ihi na ọ bụ onyinye Chineke nye gị, na-enye onwe ya n'efu; jiri ọṅụ na-eto ya, n'ihi na ọ dị njikere ịnọ n'ime gị. Ọ ga-abịa ma ọ bụrụ na ị rịọ ya ka ọ nọgide na gị ruo mgbe ebighị ebi.
Mgbe ahụ Jizọs ga-emesi gị obi ike, "Ebe ọ bụ na ị natara m, m ga-anọ n'ime gị, mejuo agụụ maka ndụ gị, ka ọ ṅụọ n'ime ya: Achọla ka mmiri ọ bụla gụọ ya. Ma m ga-enye gị ikike, nke pụtara na udo."
36 Ma asim unu, na unu ahuwom, ma unu ekweghi. 37 Ndị niile Nna m nyere m ga-abịakwute m. Onye na-abịakwute m agaghị m atụfu ya. 38 N'ihi na esiwom n'elu-igwe ridata, ọ bughi ime uche nkem, kama ọ bu uche Onye ziterem. 39 Nke a bụ uche Nna m nke zitere m, na ihe niile o nyere m agaghị efu m ihe ọ bụla, kama ọ ga-akpọlite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. 40 Nke a bụ uche nke onye zitere m, na onye ọ bụla nke na-ahụ Ọkpara ahụ wee kwere na ya, ka o nwee ndụ ebighị ebi; m ga-akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ."
Jizos nyewo ndi Galili nri nke amara n'efu. Ha hụrụ ya na ikike ya nile. Nghọta dị otú ahụ aghọbeghị nkwenye ma ọ bụ kwalite ha ikwupụta okwukwe. Ha ka na-ama jijiji. Ha na-ele Jizọs anya dịka Onye-nwe achịcha ahụ, ma na-enwe obi ike ịtụkwasị ya obi dịka mmadụ. Ha anabataghị ya n'ekele.
Jizos kwadoro ha, dika o mere na Jeruselem, ihe mere ha ji kewapu ya. Gịnị kpatara ọtụtụ ndị na-adịghị atụkwasị Jizọs obi? N'ụzọ dị ịtụnanya, Jizọs ekwughị n'ụzọ doro anya, "Ọ bụ gị kpatara ya," ma na-agwa ha Nna ahụ, gosikwa ha otú okwukwe si ewuli elu dịka ọrụ Chineke.
Jizọs nwere chọrọ iji merie onye ọ bụla site aghụghọ ma ọ bụ mere esemokwu; ọ bụ Chineke na-enye ya ndị mmehie dị ka ọ maara eziokwu banyere ha na ogo nke njikere ha ga-echegharị ma gbanwee. Ọ bụ naanị ndị Mmụọ Nsọ na-adọta ga-adọrọ mmasị Jizọs. Kraist adighi-agu ndi ogha, ndi nkwa iko, na ndi ori ori uta, ma oburu na ha abiakute ya dika ndi ozo. Ọ jụghị onye ọ bụla bịakwutere ya, ọbụna ndị iro ya. O meere ha ebere wee nye ha nzọpụta.
Kraist abughi n'ihi onwe ya, ma o bubeghi ndu ya site na ochicho onwe onye. O wee gbadata ime uche Nna ya ma meezu n'ụzọ zuru oke na nzube nke ịhụnanya Ya, ịzọpụta ndị mmehie furu efu ma debe ndị kwere ekwe bụ ndị na-achọ ịbanye n'ime ya. Obi ebere ya na nzọpụta ya dị oke mma. Ma ọnwụ, ma ọ bụ Setan, ma ọ bụ mmehie apụghị ịdọta ndị nọ n'aka ya. N'aka ebere ya, ọ ga-eme ka ndị na-eso ụzọ ya bilie n'ụbọchị ikpé ruo ndụ ebighị ebi.
Ịma uche Chineke? Ọ chọrọ ka i lee Ọkpara ya anya, mara ya ma tụkwasị ya obi. Amuru ya site na Mo Nso, juputara na amara na eziokwu. Mgbe ahụ, ọ chọrọ ka ị sonyeere Onye nzọpụta, ya na ndị niile kwere ekwe na ọgbụgba ndụ ebighi ebi nke na-adịgide adịgide; site na nzube Chineke maka gi ga-emezu. Onye kwere ekwe na-enweta ndụ ebighị ebi site na Mmụọ Nsọ na-abata n'ime ahụ ya. Okwukwe gi nime Jisos kwadoro ndu ebighi ebi n'ime gi, ndu a nke gosiputara n'ama, obi uto, udo na obi umeala. Ndụ Chineke n'ime gị adịghị agwụ agwụ. Ihe ikpeazu nke uche Chineke bụ na Jizọs ga-akpọlite gị n'ọnwụ. Nke a bụ olileanya dị ukwuu nke ndị kwere ekwe na njedebe nke ndụ nke Ọkpara ahụ nyere gị ga-apụta - ebube nke Ọkpara Ya na ìhè nke ịhụnanya Ya.
EKPERE: Anyị na-efe gị, Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ị nọghị anya n'ebe anyị nọ. Ma ị bịara anyị mgbe ndị mmadụ jụrụ gị. Ị ghotara anyị ka anyị hụ gị wee nata gị dị ka ezigbo achịcha. Daalụ maka ịjụ anyị. I mejuputara nkpuru obi anyi aguu, anyi ga-eweli anyi n'eto ebighebi na otuto otuto ebighebi.
Gịnị ka "achịcha nke ndụ" pụtara?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:04 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)